मोदीको सपथमा सहभागी हुन दिल्ली उडे प्रधानमन्त्री ओली (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मोदीको सपथमा सहभागी हुन दिल्ली उडे प्रधानमन्त्री ओली (फोटोफिचर)
तस्विरहरुः आर्यन धिमाल/डिसीनेपाल डटकम
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत प्रस्थान गरेका छन्।
बिहीबार साँझ साढे ७ बजे नयाँदिल्लीमा हुने सथपग्रहण कार्यक्रममा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली बिहीबार त्यसतर्फ लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग पत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र परराष्ट्रको दक्षिण एसिया डिभिजन प्रमुख यज्ञ हमाल दिल्ली गएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रपतिभवनमा संविधानसभा सदस्यलाई सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। दिल्लीबाट प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मी पनि सपथ कार्यक्रममा जानेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार समकक्षी मोदीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै शुक्रबार नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।